मानेभञ्ज्याङका वृद्धको कोरोनाबाट मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो बुधवार, जेठ १९, २०७८
कोरोना संक्रमितलाई मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको पोषिलो राहत ! सोमवार, जेठ १७, २०७८
मानेभञ्ज्याङमा ८६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५५ जनामा कोरोना पुष्टि आइतवार, जेठ ९, २०७८
पढ्ने उमेरमा परिवारको जिम्मेवारी ओखलढुंगा । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ६, थाक्लेका रविन सार्की १३ वर्षका मात्र भए । उनले पढाई छोडेको एक वर्ष भयो । पाँच वर्षअघि खरबारीको डढेलोमा परेर आमा निरु सार्कीले ज्यान गुमाइन् । त्यसपछि पनि उनलाई बुवाले भाईबहीनीसँग स्कुल पठाएका थिए । बिहिवार, माघ १५, २०७७
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाद्वारा कर्मचारी र शिक्षकको कोरोना विमा ओखलढुंगा, असोज २ । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले कर्मचारी र शिक्षकको कोरोना विमा गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकको कोरोना विमा गरिएको हो । शुक्रवार, आश्विन २, २०७७
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको प्रांगणमा दैनिक भइरहेको भलिबल म्याच कहिले रोकिएला ? बुधवार, भदौ २४, २०७७
मानेभञ्ज्याङ र हर्कपुरमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरिएका १८० कै कोरोना रिपोर्ट नगेटिभ ओखलढुंगा, भदौ २१ । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाबाट कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरेर पठाइएका १ सय ८० जनाकै स्वाबको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । भदौ १८ गते मानेभञ्ज्याङ र हर्कपुरका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा देखिएकाहरुको स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । आइतवार, भदौ २१, २०७७
मानेभञ्ज्याङमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्न द्विपक्षीय सम्झौता शुक्रवार, भदौ १९, २०७७
प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा कडाइ ओखलढुंगा, भदौ १८ । ४ जना प्रहरी र एकजना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि जिल्लाको मानेभञ्जयाङ गाउँपालिकामा कडाइ गरिएको छ । गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाभित्र अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा तथा क्रियाकलाप बन्द गरेको छ । बिहिवार, भदौ १८, २०७७
मानेभञ्ज्याङको ५ नं वडा कार्यालयद्वारा अनलाइन घटना दर्ता सुरु ओखलढुंगा, भदौ १५ । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको वडा नं ५ ले अनलाइन घटना दर्ता सुरु गरेको छ । प्रविधिको विकाससँगै कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधाहरुलाई प्रविधीमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ वडा कार्यालयले अनलाइन घटना दर्ता सुरु गरेको हो । सोमवार, भदौ १५, २०७७
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका हाट बजार बन्द, सतर्कता अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बुधवार, भदौ १०, २०७७
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको कोरोना खर्च कति ? ओखलढुंगा, साउन ६ । ओखलढुंगाका स्थानीय तहले लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण शीर्षकमा कति खर्च गरे ? यो विषय धेरैको चासोको विषय हो । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले भने कोरोना शीर्षकमा २१ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । मंगलवार, श्रावण ६, २०७७
जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा मानेभञ्ज्याङका २ युवक पक्राउ ओखलढुंगा, साउन ४ । छुट्टाछुट्टै घटनामा जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका २ युवक पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई पीडित पक्षको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । आइतवार, श्रावण ४, २०७७
ओखलढुंगामा आज १५ कोरोना संक्रमित थपिए, कोरोना पुष्टि भएकाको संख्या २१ पुग्यो बिहिवार, श्रावण १, २०७७
मानेभञ्ज्याङको सातसल्लेमा सहिदपार्क निर्माण ओखलढुंगा । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कांग्रेसले चलाएको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा ८ जनाको हत्या गरिएको ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं ७ को सातसल्लेमा सहिद पार्क निमार्ण गरिएको छ । प्रदेश सरकार र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा पार्क निर्माण भएको हो । बुधवार, असार १७, २०७७
मानेभञ्ज्याङबाट थाक्लेतर्फ जाँदै गरेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक मजदूरको मृत्यु मंगलवार, असार ९, २०७७
मोलुङ गाउँपालिकाबाट आगलागी पीडितको निवेदन नै गायब ! तीनमहिनादेखि राहतको पर्खाईमा पीडित ओखलढुंगा । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह कति चुस्त छ भन्ने उदाहरण जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकाको एउटा घटनालाई लिन सकिन्छ । सो गाउँपालिकाको वडा नं ३ का गुना तामाङको घर तीन महिना अघि आगलागी भएर पूर्ण क्षति भएको थियो । आगलागीबाट उनको गोठमा रहेका १२ वटा गाई र भैँसी समेत जलेर मरेका थिए । बिहिवार, असार ४, २०७७
दक्षिण कोरियामा रहेका युवाहरूले गरे उँबूका १ सय ४४ परिवारलाई राहत वितरण ओखलढुंगा । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं ३ का विपन्न परिवारलाई दक्षिण कोरियामा रहेका युवाहरुले राहत वितरण गरेका छन् । उँबू घर भई रोजगारीको क्रममा दक्षिण कोरिया पुगेका २६ युवाहरुले आर्थिक संकलन गरेर राहत वितरण गरेका हुन् । आइतवार, जेठ ३२, २०७७
फोकुल सिंचाइ योजनामा ठेकेदार र उपभोक्ता अध्यक्ष एकै व्यक्ति, ३ करोड बढीको चलखेल ओखलढुंगा । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख महेश यादवको कमिशन सेटिङमा मानेभञ्ज्याङको उँबूमा रहेको फोकुल सिंचाइ योजना सञ्चालन भइरहेको थप तथ्य ओखलढुंगाखबर डटकमले फेला पारेको छ । यादवका एजेन्टको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका प्रकाश तामाङले उक्त योजनाको ठेकेदार र उपभोक्ता समिति दुवै तर्फको काम गरिरहेको खुलासा भएको छ । आइतवार, जेठ ११, २०७७